Yini Baseboard convector kagesi ukhethe: izinhlobo kanye ukufakwa. Izibuyekezo models engcono
A imishini Ukushisa itholakala eziningi ezihlukahlukene ongakhetha, amamodeli ukulungiswa. Aggregates kuhluke ngobukhulu, isimiso Ukushisa kanye ukushisa ukusatshalaliswa, ukubukeka nokusebenza amandla. Njengomthetho, uma choice kwenziwa esivuna omunye izinkomba, kufanele anikele ezinye izici. Kwenzekani nge esigabeni icwecwe ephansi amandla heater. Kodwa kwezinye izimo, amandla okusezingeni eliphezulu ayidingekile. Ngokwesibonelo, Baseboard convector kagesi, nakuba engeyena irekhodi-full ngokuya Ukushisa kahle, kodwa esifanelana sibalelwa Interiors ezindlini yesimanje futhi kuthatha isikhala okuncane.
Izici baseboard convectors
Convectors ezibhekwa ukhetho best for amalahle ezindlini ezincane. Lokhu kungenxa yokuthi aphephile kubasebenzisi, babe Ubukhulu ezincane kanye nomklamo lemukelekako. Zonke lezi zimfanelo esikhulu ngokuphelele amamodeli baseboard. Ezinguqulweni yesimanje Baseboard convector kagesi kungabuye kushintshwe ngobuciko eliphezulu lokushisa isilawuli - kuze kufinyelele 0.1 degrees. Insimbi siqhutshwa thermostat, nakho unikeza uhla ongakhetha ukwesekwa ukumisa yokusebenza nemingcele.
Njengoba sekushiwo, zalamaqembu.I ngeke kuqhathaniswe nge ukusebenza ngamandla izilungiselelo okunye emikhulu, kodwa leli phutha kungenziwa offset ngokusebenzisa amathuluzi amaningi ngesikhathi amaphuzu ezahlukene endlini. Esebenzisa adaptha ekhethekile Baseboard convector kagesi kungenziwa kalula kufakwe inethiwekhi isiyonke heater amaningi.
heater Ezivamile kukhona uhlobo oluhlukile yasibamba futhi ifomu isici, kodwa baseboard ukuguqulwa cishe njalo ukuhlinzekela odongeni obandayo. Ngakho-ke, i-basic ngokwahlukana isici uhlobo thermostat, ngenhlanhla, kungenzeka ukuthi ingabi ngokuphelele izindleko izinguqulo. Ngakho, zingalawulwa ngokusebenzisa Mechanics noma ngemishini. Amath- yohlobo yokuqala asethwe ngesandla, kodwa imodeli ne imishini eshibhile. Electronics kwenza convectors baseboard uhlobo kuyabiza, kodwa unezela lula ngesikhatsi kokuhlinzwa. amadivaysi Modern ngokuphelele ungahlinzekela indlela ehlelwe ukusebenza. Convectors nazo labizwa ngokuthi kuhlosiwe mayelana nokusetshenziswa. Abakhiqizi ukukhiqiza onobuhle esikhethekile conservatories, zokugcina, amakamelo aphilayo, okulala kanye namakamelo zezingane.
Uphenyo "Megador" onobuhle
Izinzuzo main yalezi heater zihlanganisa imisebenzi ebalulekile. Njengoba kuphawuliwe abasebenzisi, convectors alo mkhaya akagcini ngokunikeza okusezingeni eliphezulu okukhipha ezishisayo, kodwa futhi kufanele ukunemba okuphezulu ngokulungisa lokushisa ukuze ukusebenza okudingekayo. Ikakhulukazi, uchungechunge "Corner" kuyinto ukuthuthukiswa ethembisa kunayo brand "Megador". Baseboard convector, ukubuyekezwa mayelana ukushisa lapho isebenta ngokuvamile osekelayo, kungenzeka ukubonisa kahle izikhala zokuphepha. Lokhu kusebenza futhi ukukhiqizwa umenzi. Abasebenzisi abaningi ibonisani nokutubeka ukugcwaliswa yangaphakathi, kanye ikhwalithi embi ukwahlukanisa.
Izibuyekezo imifanekiso Dimplex
Manufactured ngaphansi brand Dimplex baseboard LC imodeli chungechunge. Ngokusho abanikazi, lezi heater abe okusheshayo Ukushisa umthamo, isebenze kunjalo akukho umsindo futhi kudinga amandla ngoba esincane amandla. Nokho, ngokungafani imodeli langaphambilini, ukuguqulwa LC anosayizi ehloniphekayo, ngakho awawabheki ultra-compact imishini heater. Kodwa ngokuya nokwethenjelwa baseboard heater kagesi Dimplex izikhalazo neze kubangele. Isiphathi ukude unezela amadivayisi ergonomic futhi evikela umzimba panel ikuvumela ukuthi usebenzise idivayisi ngisho egumbini lezingane.
Izibuyekezo imifanekiso Noirot
Melodie Evolution line is kuthambekele ukusetshenziswa e ezincane amakamelo endaweni mayelana 10 m2. Abanikazi lezi amadivaysi akhombise umsebenzi ozinzile nge ukufudumala osheshayo, kanye ukugqamisa enamathela ekhethekile elingaphandle izindlu. Iqiniso lokuthi abaklami esetshenziswa Bokuhlela mimetic, lapho panel yangaphandle ukuthatha umthunzi ukuthi ingxenye engcono kakhulu egumbini Ukwakheka yesitayela. Ngaphezu kwalokho, baseboard Ukushisa convectors kusukela Noirot babe amath- yesimanje, okulula ukuphatha. Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi ukhombise yesondlo okunembile kwezindikimba lokushisa isethi.
Okumbi baseboard convectors
Noma kunjalo, ububi eyinhloko cishe zonke convectors baseboard namanje ukuntula amandla, okuyinto ngenxa ubukhulu imishini bafudumale isimiso. Wona kanye umqondo welithi zinsizakuphila ayikuvumeli operation at amandla okusezingeni eliphezulu - futhi lokhu ngenxa yezimfuneko sokuphepha. Ngandlela-thile, kodwa sebenzisa Baseboard convector ukushisisa amakamelo endaweni enkulu okungalungile. Okungenani, ngeke ukunikeza izidingo umsebenzi main Ukushisa imithombo. Enye kusimo kuyinto ukusetshenziswa amandla. Ububanzi ingqikithi heater kagesi ingenye amayunithi ukonga kakhulu - noma kunjalo, abakhiqizi ukubonisa njalo ezintsha okuhloswe ngaso iqhakambisa izindleko zokuqhuba ibhizinisi. Kodwa uma iqhathaniswa kumadivayisi asebenzisa oku gas, amanzi noma imithombo okuqinile, izimali wokugcinwa imishini enjalo ngeke kakhulu idlule okufunwa izinhlelo okunye.
Kufanele siqondiswe at amandla ezingaba, ifomu factor, khona ezengeziwe tekusebentisa ukulungiswa uhlelo. Basic zisekhona izinkomba lobuchwepheshe nokusebenza, lokufaka ekhatsi emandla lokushisa ububanzi. Uma izidingo ezikhethekile amalahle hhayi, ungayeka ukukhetha omunye onobuhle "Megador". Isigaba oluphansi lingu Baseboard convector kagesi, intengo okuyinto ecishe ibe yizinkulungwane 5. Deda. Lena indlela enhle uma udinga ukunikeza ukushisa ikamelo ephilayo encane noma ekhishini. Uma imishini ukuze ahlangabezane nezidingo okusezingeni eliphezulu ngokuya Ergonomics nokusebenza, ukukhetha senziwa esivuna Dimplex brand. Lezi zinhlelo lula ukusebenza, ukunikeza sasiqonda kabusha uhlelo lokulawula convector, kanye ephephile ukuyisebenzisa. Noirot imikhiqizo inkampani eliphezulu zonke zindlela, kodwa angathengwa ayizinkulungwane 15-20. Kuyinto lemali kunalokho enkulu heater wosayizi omncane, kodwa umsebenzisi angakwazi futhi ukubala ukuqina kanye nokwethenjelwa zedivayisi.
imisebenzi LoMhlangano kudinga kancane ukwenza umsebenzi ezingcolile. Wall okunamathiselwe indlela kuhilela ukusetshenziswa hardware uxhumano, ukukhethwa zazo kubangelwa kokuqeda impahla. kubaluleke kakhulu ukuba bagcine izimfuneko indawo kudivayisi. Njengoba abakhiqizi ukufakwa baseboard convectors kumele akenzanga cm engaphezu kwengu-20 kusukela ezingeni isembozo phansi. Lapho projection odongeni, okuyinto zitholakala ngenhla umshini, ke akumele leqe 15 cm. Co. nayo yonke convectors uyalandisa ngokuvamile ilungiselelo ifenisha kanye nezinye izinto ingaphakathi ngokuhlobene evele eshubile. Njengoba for lwenethiwekhi, njengoba kuqhathaniswa ephezulu amandla bafudumale imishini, okuyinto isikhathi esiningi emelelwa kubhayela ukufaka, amadivaysi idatha ukusebenza kuphela kusukela inethiwekhi 220 V Nalapha futhi, kusetshenziswa izesekeli lokukhuphula ezishaywayo, umnikazi efulethini eziyinkimbinkimbi encane nihlela Ukushisa izakhiwo ngosizo izitofu ezimbili noma ezintathu. Wiring ingalungiswa in the komhlaba, futhi niches zastennoy.
Ukuguqulwa ingxenye bekulokhu ezikhangayo abanikazi emafulethini njalo. Ngokuyinhloko, ngenxa yokuthi la mathuluzi kudinga isikhala okungenani, awusebenzi konakalisa ukubukeka elingaphakathi ngesikhathi esifanayo ukuze ubhekane ngokuphumelelayo imisebenzi yabo. Ngaphezu kwalokho, futhi intengo, le ndlela namanje uhlala omunye ezikhanga kakhulu. Engingakusho nje ukukhumbula ukuthi kagesi baseboard convectors "Megador" kuyatholakala emakethe ngoba 5-6 ayizinkulungwane. Deda. Nokho, lapho ukhetha uhlelo Ukushisa kusaqalwa futhi Kumele bahlole kungenzeka ngokusebenzisa ezinye izixazululo. Mhlawumbe esincintisana esiseduzane Converter yalolu hlobo ingase ibe Ukushisa ngomshoshaphansi. Lezi izinhlelo kufihlwe ngokuphelele phansi, futhi Yenziwe Ukushisa izindawo. Nokho, ugesi, izinhlelo ezinjalo ezibizayo. Ngaphezu kwalokhu kufanele wanezela, nobunkimbinkimbi ukufakwa. Ngakho-ke, baseboard heater zisekhona isinqumo kwangabi bikho ophikisayo, futhi uma nokungabi namandla endimeni ekhethekile, ngokuya izinga ukusebenza, ayifuni ukudlala ke ohlelweni kungenzeka lungasetshenziswa njengendlela eyinhloko Ukushisa umthombo.
Diaphragm futha: isicelo kanye nezici
Ukukhuluma zopholi. Yini zohlobo amenable ngaphezulu zokufunda